EditShare အကယ်ဒမီသည်မီဒီယာသမားများအားတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောသင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရသင်တန်းများသို့ရှေ့သို့လှည့်ပါ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditShare အကယ်ဒမီသင်တန်းနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Programs ကို Authorized နယူးနှင့်အတူရှေ့ကိုမီဒီယာပညာရှင်များစေ့ဆျော
EditShare အကယ်ဒမီသင်တန်းနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Programs ကို Authorized နယူးနှင့်အတူရှေ့ကိုမီဒီယာပညာရှင်များစေ့ဆျော
EditShare တွဲဘက်, EditShare အင်ဂျင်နီယာနှင့် EditShare အရောင်း Professional ကသင်ယူမှုအပုဒ်၏ mastery ဖို့လမ်းကြောင်းကိုအရှိန်မြှင့် EditShare ရောင်းအားနှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များအဘို့အကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများ
အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန် - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - EditShare® အဆိုပါ IBC2019 ပြပွဲကြမ်းပြင်ကနေထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့နည်းပညာကိုပူးပေါင်းအထူးပြုကြောင်းခေါင်းဆောင်, လုံခြုံရေးနှင့်မီဒီယာဖန်တီးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသိဉာဏ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်, (7.A35 ရပ်) ၏ပစ်လွှတ် EditShare အကယ်ဒမီ။ နည်းပြဆရာဦးဆောင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်သူမှအစပြုသူများထံမှကျောင်းသားများကိုယူဖို့ဒီဇိုင်းက e-သင်ယူခြင်းသင်တန်းများ၏တစ်ဦးရောနှော EditShare ကိရိယာများနှင့် Workflows သည် EditShare အကယ်ဒမီရောင်းအားနှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များသုံးဒေသများ၏တဦးတည်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းလက်မှတ်အတွက် culminates တစ်ခုစနစ်တကျသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကမ်းလှမ်း: EditShare တွဲဘက်, EditShare အင်ဂျင်နီယာနှင့် EditShare အရောင်း Professional က။ နှင့် EditShare ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဆတိုးတကျမှုစီမံခန့်ခွဲဖို့ရှေးခယျြမှု၏ဖြေရှင်းနည်း, EditShare အကယ်ဒမီရောင်းအားအင်ဂျင်နီယာများ, အိုင်တီမန်နေဂျာနှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များစနစ်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာတိုးမြှင့်ဖို့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အသိပညာမှာအပြေးသောယုံကြည်မှုပေးသည်။
"အစဉ်အလာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များများအတွက် Post-ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်များနှင့်ဝယ်လိုအားထက်ကျော်လွန်မီဒီယာရှုခင်းဆိုင်းစျေးကွက်သစ်သို့ချဲ့ထွင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အရောင်းရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်သစ်ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေသည်သွားလာရန်သူတို့ကိုတပ်ဆင်နှင့်မှမိမိတို့ခွဲခြားနိုင်သောသင်တန်းနှင့်အောင်လက်မှတ်အစီအစဉ်များလိုအပ် ဝန်ထုပ်"စတူးဝပ် McGeechan, ဖောက်သည်အောင်မြင်မှုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ comments, EditShare။ "EditShare အကယ်ဒမီဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက်ပေးရန်နှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်အရေးပါသောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်, မှာထိပ်တန်းဦးစားပေးတတ်သော EditShare။ ဒါဟာအသိုင်းအဝိုင်းအသစ်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုရဖို့နှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာဒီဇိုင်း, installation နဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်လွှားသူတို့ရဲ့အခွက်မြှင့်တင်ရန်တွန်းအားပေးနိုငျသောကြီးမားတဲ့သင်ယူမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်သင်တန်းများဖန်တီးမှုနှင့်သို့မဟုတ်အရောင်းအပုဒ်အတွက်ကြိုတင်အလုပ်အကိုင်များကိုကူညီနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်, သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသူတို့တစ်တွေ post ကိုစက်ရုံတစ်ဦးမီဒီယာဌာနနှင့်အတူကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုကျယ်ပြန်အသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုပေးအရောင်းမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်ရှိမရှိရှင်သန်ကူညီပေးပါမည်။ "
EditShare အကယ်ဒမီသင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်များအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖုံးလွှမ်း EditShare'' s ကို EFS နဲက high-performance ကို shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်, Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်), QScan automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (AQC) နှင့် Helmut ။
အဆိုပါ EditShare အပေါင်းအဖေါ် Program ကို: များ၏အခြေခံအသိပညာနှင့်အတူရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်ပေး EditShare ထုတ်ကုန် workflow နှင့်ဖြေရှင်းချက်။
အဆိုပါ EditShare အင်ဂျင်နီယာ Program ကို: ဤလမ်းကြောင်းပြီးစီးပေါ်၌ရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏ကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အသိပညာငှါငါပညတ်မည် EditShare ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ။
အဆိုပါ EditShare အရောင်း Professional က Program ကို: တက်ကြွစွာအရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့များနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောဖောက်သည်အောင်မြင်မှုစီမံခန့်ခွဲသူကိုရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
EditShare အကယ်ဒမီသင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် CSMD Group မှ, နှစ်ဦးစလုံးထွန်းသစ်စနှင့် Fortune 500 ဖောက်သည်များအတွက်ခြွင်းချက် End-user အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူသင်တန်းနှင့်အောင်လက်မှတ်အစီအစဉ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်နှင့် တွဲဖက်. ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် EditShare လေ့ကျင့်ရေးရက်စွဲများနှင့်အဆက်အသွယ်အပါအဝင်အကယ်ဒမီ, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး editshare.com/academy.
နှင့်တွေ့ဆုံရန် EditShare IBC မှာ
IBC2019 မှတက်ရောက်ဆွေးနွေးရန်အစည်းအဝေးတစ်ခုစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် EditShare အသစ်ကပထမဦးဆုံးလက်တွေ့မြင်မှအကယ်ဒမီ EditShare နည်းပညာမှာထုတ်ဖော်ပြသ: editshare.com/ibc-2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida အေတြ႕အၾကံဳျပည့္အလင္းျပသူမ်ား တည်းဖြတ်ခြင်း EditShare ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC2019 SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို လေ့ကျင့်ရေး TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: Mediability သူတို့ရဲ့ Software ကို-as-a-Service ကိုမိုဃ်းတိမ်၌ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အတူကမ်းလှမ်းပြီးပြည့်စုံ OTT ပလက်ဖောင်းချဲ့ထွင်ဖို့ Vimond နှင့်အတူမိတ်ဖက်
နောက်တစ်ခု: avid ProRes RAW နဲ့ DNx codec ဖြင့် Video တည်းဖြတ် Workflows ဘဝမှကယျတငျ